Kedu otu esi ejikọta mkpokọta weebụ na Search Engine Optimization?
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-amalite usoro ọhụrụ maka ihe ọ bụla azụmahịa n'ịntanetị, a na-etinye òkè ọdụm nke nyocha na ntanetị weebụ yana Search Engine Optimization (SEO). Ka anyị chee ya ihu - inwe ihe ntanetị mara mma, onye ọrụ-enyi na onye ọkachamara bụ isi nsogbu mgbe ọ na-abịa inye ndị ọbịa ohere dị mfe. Ma gịnị ma ọ bụrụ na m na-ekwu na ọrụ niile a siri ike na ntinye weebụ nwere ike ịghọ nanị n'efu mgbe niile? Kedu ihe ma ọ bụrụ na ndị ọrụ Ịntanetị agaghị ahụ ebe nrụọrụ weebụ dị otú ahụ na ndepụta nke SERPs nke Google? Nke ahụ bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-atụle ihe dị mkpa nke inwe nhụsianya kachasị mma maka ọrụ gị na imewe mkpokọta weebụ na Search Engine Optimization mgbe nile na-abịa n'aka-aka.
Ntọala njikwa search engine ọ bụla na-amalite site n'itinye ihe niile anya gị dịka ọchụchọ algorithms. Enwere m ike ịchọta mkpado ọkụ maka foto ọ bụla ị na-etinye na ibe weebụ gị. Ihe bụ na ọtụtụ n'ime engines na-achọ (yana Google n'onwe ya) enweghị ike "ịgụ" ihe ọhụụ anya ma ọ bụrụ na foto ọ bụla etinyeghị nkọwa dị mkpa na ederede. Ọzọkwa, inwe mkpokọta weebụ gị na nnukwu nnukwu ihe oyiyi ga-eme ka ị gbasaa n'ogologo ọsọ nke loading, ya mere na-eme ihe ọjọọ maka ọkwa gị dị elu na SERPs. Ọ bụ ya mere ọ dị oke mkpa iji gbasaa ihuenyo gị anya mgbe ị na-echeta ụkpụrụ nduzi SEO na-eduzi aha mgbe ị na-ahọrọ aha maka ihe oyiyi, na itinye ha na mkpụrụokwu ndị ziri ezi ndị ahịa gị nwere ike itinye na nyocha ọchụchọ.
Ebe nrụọrụ weebụ na-anabata ozi ọma na-eme ka mmelite search engine dị
n'oge a, a na-eji ngwaọrụ ndị dị mkpirikpi eme nchọgharị maka Ịntanetị ugboro ugboro.N'iburu n'uche na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-azụ ahịa na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha chọrọ site na smartphones na mbadamba, a na-enye ọdịdị weebụ weebụ na-enwe mkparịta ụka enyi na ọkwa dị elu na SERPs. Ya mere, Google amalitela ịchọta ebe nrụọrụ weebụ ndị ahụ na-agba ọsọ n'enweghị usoro kwesịrị ekwesị nke ọrụ ndị a kwadoro maka ahụmịhe nchọgharị na-eme nchọgharị site na ngwa ngwaọrụ. Ọ bụ ya mere ọ bụ echiche ezi uche dị na ya mgbe niile iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị na-emeghachi omume na-ejigide Ịchọpụta Nchọpụta Ọcha na arụ ọrụ n'otu oge ahụ. Na-eme nke a, echefula iji jide n'aka na ọdịnaya gị na-anabata ozi olu. E wezụga nke ahụ, ndị ọkachamara na-atụ aro ka ị nweta ụfọdụ ngalaba ngalaba aha nke kachasị mma maka ngalaba aha gị. Cheta, ọrụ dị otú ahụ aghọworị MUST iji gboo mkpa nke ajụjụ ịchọrọ mkpu olu dabeere na ajụjụ ugbu a.
Na-arụ ọrụ na URL gị
Nke a na-abịa otu nhọrọ ọzọ iji weta mmezi ka ukwuu na nhazi weebụ gị na Search Engine Optimization. Ekwuru m na ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ nlezianya anya mgbe ị na-ahọrọ aha ngalaba ahụ. Nyere na ị nwetala otu, a dụrụ gị ọdụ ka ị tinye akwụkwọ aha Google maka aha ọ bụla nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Nwee URL ọ bụla na peeji nke aha ịghaghachite iji kọwaa nkọwa dị mkpa nke bara ọgaranya na ọnụọgụ isiokwu na nkebi ahịrịokwu. Ime otú ahụ, ị ​​ga-enweta ezigbo nkwalite mmekọrịta nke onye ọrụ maka nhazi weebụ gị, na Search Engine Optimization na-eje ozi iji mara mma maka nhazi ndepụta nke bots nke Google Source .